कार्यवाहक अध्यक्ष दिन्छु भन्दै भीम रावललाई ओलीको फोनः रावलले के दिए जवाफ ? ⋆ afno sansar
प्रकासित : ६ श्रावण २०७८, बुधबार १०:१९
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष भीम रावललाई फोन गरेर माधव नेपाल पक्षको बैठकमा नजान आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुभन्दा केहीबेर अघिमात्रै सांसद् पदबाट राजीनामा दिएका थिए । संसद् बैठक सुरु नहुँदै रावलले माधव नेपाललाई भेटेर देउवाको विपक्षमा मत दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, रावललाई नेता नेपालले हप्काएर यस्तो प्रस्ताव लिएर आफूकहाँ नआउन चेतावनी दिएपछि उनी रुष्ट बनेर त्यहाँबाट निस्किएका थिए ।
रावलले राजीनामा दिएको विषयमा अध्यक्ष ओलीको पनि चित्त बुझेको छैन् ।उनले पार्टीको ४ र ५ गते ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा रावलले आवेशमा आएर सांसद् पदबाट राजीनामा दिएको टिप्पणी गरेका थिए । र, सकेसम्म रावललाई सांसद् पदको राजीनामा फिर्ता लिन दबाब दिनुपर्ने बताएका थिए ।
आज नेपाल पक्षले सांसदहरु र केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक राखेका छन् । उक्त बैठकमा सहभागी नहुन रावललाई अध्यक्ष ओलीको फोन गएको स्रोतको दाबी छ । ओलीले पार्टीमा फर्किएर काम गर्न पनि रावललाई आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि नै कार्यदलमा संयोजक हुँदा रावलले ओलीसँगको भेटवार्तालाई बाक्लो बनाएका थिए । कतिसम्म भने ओलीले पार्टीमा कार्यवाहक अध्यक्षसमेत वचन दिएका छन् । मेरियट होटलमा रअका प्रमुख सँग भेटवार्ता गरेको र ओलीको प्रलोभनमा परेको आरोप रावलमाथि लागेको छ । तर उक्त आरोपको उनले खण्डन भने गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका भीम रावल हेर्दा निक्कै हक्की देखिन्छन्, कडा स्वभावका पनि । तर यसरी कडा स्वभावका मान्छे क्षणभरमै क्षणिक लाभमा कसरी सस्तिदा रहेछन भन्ने उदाहरण पनि उनी बनेका छन् । एमालेभित्रको विवादमा चर्का आलोचक थिए रावल अध्यक्ष केपी ओलीको । तर उनी ओलीसँगको एउटै भेटमा कसरी गले ? अहिले सबैको जिज्ञासा एउटै छ । तर उनको राजनीति हेर्ने हो भने एमालेभित्रकै धेरैले उनलाई अवसरवादी‘ नेताका रुपमा पनि आरोपित गर्ने गरेका छन् ।
रावलले विचमै मैदान छोडिदिएपछि नेता माधव कुमार नेपाल निराश भएका छन् । मैदान छोडेर भागेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ । यद्यपि चर्काे विरोध र दबाब आएपछि नेता रावलले आफ्नो राजीनामा फिर्ता लिने मुडमा रहेको पनि बताइएको छ । तर यसको आधिकारिक पुष्टि भने गर्न सकिएन् ।
६ श्रावण २०७८, बुधबार १०:१९